.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: လေးဖြူ - ခဏလေးများ Album
လေးဖြူ - ခဏလေးများ Album
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ လေးဖြူရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ခဏလေးများ Album ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်မှာ လိုင်းပေါ်မှာတင် နားထောင်နိုင်သလို ဒေါင်းယူလို့လည်း ရပါပြီ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ။
1 သတိမေ့သွားတဲ့ည Click Here !! 1.50 MB
2 ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း Click Here !! 2.20 MB
3 မင်းမှမင်း Click Here !! 2.00 MB
4 ဖွဲမီး Click Here !! 1.70 MB
5 ခဏလေးများ Click Here !! 1.70 MB
6 ခရီးအဆုံးထိ Click Here !! 1.70 MB
7 မမေ့ပစ်နဲ့ Click Here !! 2.30 MB
8 သတ္တိမရှိတော့ဘူး Click Here !! 1.80 MB
9 သိချင်တယ် Click Here !! 1.60 MB
10 လျှောက် လျှောက် Click Here !! 1.80 MB
11 မရေရာဘူး Click Here !! 2.30 MB
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ Mp3 သီချင်း ဒေါင်းလုပ်လင့်တွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ (လုံးဝ) ကူးတင်ခွင့်မပြုပါ။
Posted by Thurainlin at 08:06
Labels: Mp3, Mp3 Album